Ahmed Haaddi | Radio Himilo
Home / Author Archives: Ahmed Haaddi
Author Archives: Ahmed Haaddi
Ahmed Haaddi Yesterday at 7:45 am
Maqal– Raxiiqul Makhtuum – Casharka 199aad
Ahmed Haaddi Yesterday at 7:17 am
Himilo – Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada uu saameeyay karoona, dadka ka badan 25 kun ayuu ku dhacay, halka ay u dhinteen tiro dhaafaysa kun qof oo ay ku jireen masuuliyiin sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. Cilmi baaris uu ...
Himilo – Dhowrkii sanno ee ugu dambeeyey, waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanayay dhallinyaro da’ dhexaad ah oo wata mindiyo, baangado iyo dhallooyin la jibiyey. Dhalinyaradaaa, waxay u abaabulan yihiin koox koox, aad ayay u diyaarsan yihiin marka loo eego ...
Ku Dhawaad 30 dhallinyaro ah ayaa shaqo abuur ka helay Makhaayad ku taalla Muqdisho oo sameysa cunnooyinka dalka ka soo go’a. Dhallinyaradan waxaa kuwo jira kuwo jaamacddo dhammeeyay oo shaqo la’aanta la dhibaatoonayay. Waxay isugu jiraan gabdho iyo wiilal, waxay ...
Maqal– Raxiiqul Makhtuum – Casharka 198aad
Wiil Soomaaliyeed ah oo Sabab u noqday Islaamidda Gabar Ruushiyan ah
Himilo – Saaxiibadii iyo ehelkii ay ka dhalatay waxay wali ugu yeeraan EKratine laakiin marwalba oo usoo daadagto waddooyinka magaalada iyada oo xiran xijaab magaceedu wuxuu isku beddelaa samiiro. Kanina waa shaqsiga ugu muhiimsan nolosheeda oo fure u ah fahamkeeda ...